Mabda 'Teknolojiyada FMBR - JDL Global Environmental Protection, Inc.
FMBR waa soo gaabinta bioreactor xuubka facultative. FMBR waxay u isticmaashaa shey-baareyaasha astaamaha si loo abuuro jawi is-weydaarsi iyo sameysma silsilad cunno, iyadoo hal-abuur lagu gaarayo dheecaanka jirka ee hooseeya iyo hoos u dhigista isku mar ee sunta. Saamaynta kala-soocidda xuubka awgeed, saamaynta kala-soocidu waxay aad uga fiican tahay tan taangiga dhaqameed ee qashinka, qulqulka la daweeyey aad ayuu u cad yahay, arrinta la joojiyey iyo jahwareerka ayaa aad u hooseeya.
Neefsashada unugyada unugyada jirka waa habka ugu muhiimsan ee yareynta dhoobada jirka. Feejignaanta ballaaran ee biomass, SRT dheer iyo xaalad hoose oo DO ah, nitrifiers-yada kala duwan, noolaha ammonia oxidized noolaha (oo ay ku jiraan AOA, Anammox), iyo denitrifies way isla noolaan karaan isla deegaanka isku-dhafka ah, iyo microbes-ka nidaamka ayaa midba midka kale ka dhameystiraya si uu u sameysto websaydhka cuntada microbial ah isla markaana ka saar C, N iyo P isku mar.
Removal Ka qaadista isku mar ee kaarboon-ka dabiiciga ah, nitrogen iyo fosfooraska
Dis Soosaarida dheecaanka haraaga ah ee haraaga ah
Quality Tayada dheecaanka oo aad u fiican
Addition Ku darista kiimikada ugu yar ee ka saarista N & P
Period Muddo dhisme oo gaaban
Foot Raad yar
Consumption Isticmaal tamar jaban / hooseeya
Yaree qiiqa kaarboon
● Si otomaatig ah oo aan loo ilaalin
Noocyada Dhismaha ee FMBR WWTP
Xirmada Qalabka FMBR WWTP
Qalabku waa mid si heer sare ah isugu dhafan, shaqada madaniguna waxay u baahan tahay oo keliya in la dhiso qaddarinta, aasaaska qalabka iyo haanta qulqulaya. Raadku waa yar yahay muddada dhismuhuna waa gaaban yahay. Waxay ku habboon tahay goobaha muuqaalka leh, dugsiyada, goobaha ganacsiga, hudheelada, jidadka waaweyn, ilaalinta wasakhda biyaha, daaweynta baahinta, iyo dhirta daaweynta ee meelaha la deggan yahay, mashruuca degdegga ah, WWTP oo la casriyeeyo.
FMBR WWTP la taaban karo
Muuqaalka dhirtu waa bilic qurxoon oo leh raad yar, waxaana lagu dhisi karaa WWTP deegaan, oo aan saameyn ku yeelan doonin muuqaalka magaalada. Noocan FMBR WWTP wuxuu ku habboon yahay mashruuca weyn ee WWTP ee degmada.
Habka Daaweynta FMBR
Tikniyoolajiyadda daaweynta biyaha qashinka ah waxay leedahay habab badan oo daaweyn ah, sidaas darteed waxay u baahan tahay taangiyo badan oo loogu talagalay WWTPs, taas oo ka dhigaysa WWTPs qaab dhismeed murugsan oo leh raad weyn. Xitaa WWTP-yada yar, waxay sidoo kale u baahan tahay taangiyo badan, taas oo u horseedi doonta qarash saaid ah qarashka dhismaha. Kani waa waxa loogu yeero "Saamaynta Miisaanka". Isla mar ahaantaana, habka daaweynta dhaqanka biyaha daata ayaa soo saari doona tiro badan oo ah dhoobo, urkuna wuu culus yahay, taas oo macnaheedu yahay in WWTP-yada laga dhisi karo agagaaraha aagga la deggan yahay. Kani waa waxa loogu yeero dhibaatada "Daaradadayda Kuma Jirto". Labadan dhibaato awgood, WWTP-yada caadiga ah badanaa waawayn oo aad ayey uga fogyihiin deegaanka la deggan yahay, sidaa darteed nidaam bullaacad oo ballaadhan oo maalgashi badan ayaa sidoo kale loo baahan yahay. Waxaa sidoo kale jiri doona soo galid fara badan iyo soo galida nidaamka bulaacada, ma aha oo kaliya inay wasakheyn doonto biyaha dhulka hoostiisa mara, laakiin sidoo kale waxay yareyn doontaa waxtarka daaweynta ee WWTPs. Sida laga soo xigtay daraasadaha qaarkood, maalgashiga bullaacaddu wuxuu qaadan doonaa qiyaastii 80% maalgashiga guud ee daaweynta biyaha wasakhda ah.
Tiknoolajiyada FMBR, oo ay soo saartay JDL, waxay yareyn kartaa isku xirnaanshaha daaweynta badan ee tikniyoolajiyadda dhaq dhaqaaqa hal xiriiriye FMRB ah, nidaamkuna si aad ah ayuu isugu duuban yahay waana qalab isku dheelitiran, sidaas darteed raadku wuu yaraan doonaa shaqada dhismuhuna way fududahay. Isla mar ahaantaana, waxaa jira dhoobada haraaga ah ee haraaga ah oo aan udgoon laheyn, sidaa darteed waxaa laga dhisi karaa agagaarka aagga la deggan yahay. Gabagabadii, tiknoolajiyada FMBR waxay si fiican ugu habboon tahay habka daaweynta baahsan, waxayna xaqiiqsaneysaa "Isku-uruurinta, Daweynta iyo Dib-u-isticmaalka Goobta", taas oo sidoo kale yareyn doonta maalgashiga nidaamka bullaacad.
WWTP-yada caadiga ah waxay badanaa korsadaan taangiyada qaab dhismeedka la taaban karo Noocyada noocan ah ee WWTPs ayaa qaada raad weyn oo leh qaab dhismeedka dhir adag iyo ur culus, muuqaalkuna waa mid aan fiicnayn. Si kastaba ha noqotee, adoo adeegsanaya tiknoolajiyada FMBR oo leh astaamo sida habka fudud, ur iyo dhowr haraaga haraaga ah, JDL waxay geedka ka dhex dhisi kartaa "nidaamka daaweynta dhulka hoostiisa iyo baarkinka dhulka hoostiisa ah" WWTP ee deegaanka leh daaweynta biyaha wasakhda ah iyo dib u isticmaalista, taas oo aan badbaadin karin oo kaliya raad, laakiin sidoo kale waxay siisaa meel cagaaran bey'ada deegaanka ee ku hareereysan. Fikradda ah 'WBTP' deegaanka ee 'FMBR' waxay bixisaa xal cusub iyo fikrad ku saabsan kaydinta iyo dib-u-warshadaynta, iyo WWTP bey'adeed u fiican.